Nkọwapụta French: kedu ihe ha bụ? - UniProyecta
N'ime ụwa ụtọasụsụ, nkwalite dị mkpa n'ihi na anyị na -eji ha kwa ụbọchị na -ahụghị. A kọwara ndị a dịka okwu ndị na -ejikọ aka na akụkụ ọzọ nke ahịrịokwu iji kọwaa mmekọrịta dị n'etiti ihe abụọ ahụ.
Mmekọrịta ndị a anyị gwara gị laa azụ na -abụkarị ọmụmaatụ ntụzịaka, ọnọdụ ma ọ bụ oge mana ha nwekwara ike nwee ebumnuche ọzọ karịa nke anyị kpọrọ gị aha.
Ugbu a na -elekwasị anya na ndị na -amụ asụsụ French, prepositions nwere ike ịbụ ihe kacha esiri gị ike ịmụta ma ọ bụ otu n'ime ihe ndị kacha mgbagwoju anya. Gịnị mere o ji dị otu a? N'ihi na okwu, ihe ọ pụtara, na ụzọ e si ede okwu nkwupụta okwu na French ha na -ewepụta oge ịmụta, ịghọta ma ọ bụ iburu n'isi ka ọ na -ewe oge ịmụ ha. Ma echegbula, ebe a anyị ga -egosi gị ụzọ kachasị mfe.
Ugbu a, ka anyị dị iche n'ụdị nkwupụta dị iche iche ka ị marala onwe gị, nke mbụ anyị nwere ọnọdụ na mgbe ahụ nke ebe (ebee, ebee, ebee).
1 Nkọwapụta ọnọdụ French
1.1 Preposition na -enweghị de
1.2 Nkọwapụta na de
2 Nkọwapụta nke ebe
Nkọwapụta ọnọdụ French
na nkwupụta nke ọnọdụ na French Ha bụ ndị na -etinyekarị ihe na oghere, ya bụ, tinye ya, eziokwu dị mkpa bụ na a na -eji ha n'otu ụzọ ahụ n'asụsụ Spanish, ma ọ bụ n'ihu aha ma ọ bụ ọ nwekwara ike ịgụnye nkwupụta. "Nde".
Ka ị wee nwee ike ịmụ ma ghọta ụdị a nke ọma, anyị na -eke ụzọ ntụnye ọnọdụ n'ọnọdụ abụọ, dị ka ndị a: ndị na -adịghị ebu na ndị na -ebu.
Preposition na -enweghị de
Nkwupụta okwu na French na -enweghị de bụ ndị na -agaghị enwe “de” ma a na -ejikwa ya eme ihe n'ihu ihe anyị na -ede. N'ebe a, anyị ga -enye gị ụfọdụ atụ ka ị wee nwee ike ịhazi onwe gị nke ọma n'ọmụmụ isiokwu a dị mgbagwoju anya. Mbụ anyị ga -agwa gị ihe eji eme ya n'asụsụ French, mgbe ahụ ihe ọ pụtara n'asụsụ Spanish ma n'ikpeazụ anyị ga -enye gị atụ.
Devant ——–> n’ihu / n’ihu ——–> Ils t’attendent n'ihu la porte (ha na -eche gị n'ihu ọnụ ụzọ)
South ——–> banyere ——–> Le chat dort sur sofa (pusi na -ehi ụra na sofa)
Derrière ——–> n’azụ ——–> J'ai compreu un bruit n'azụ moi (Anụrụ m mkpọtụ n'azụ m)
Sous ——–> n'okpuru / n'okpuru ——–> Jaaime marcher sous la pluie (Ọ na -amasị m ije ije na mmiri ozuzo)
Contre ——–> megide ——–> La voiture s'écrasa megide le mur (ụgbọ ala ahụ dara na mgbidi)
Na foto dị n'okpuru a, anyị ga -ahapụrụ gị ihe atụ nke prepositions na French na -enweghị de ka ị wee mụta ihe, yabụ na anyị emeela ụdị nkwalite ndị ọzọ.
Nkọwapụta na de
Ụdị nkwalite a na -ebu "site" iji nwee ike izo aka n'ihe, ma ọ bụ nwee ike mezue ahịrịokwu yana ozi. Mana oge ụfọdụ ọ dịghị mkpa iji "nke" maka na ejiri ya mee ihe.
N'ebe a, anyị ga -egosi gị ntụnyere:
Elle habit tout nso chezie moi.
Ọ bi nso n'ụlọ m
Elle habit tout ihe.
O bi ezigbo nso.
N'okpuru, ị ga -enwe ndepụta zuru oke yana nkwalite n'asụsụ French nwere “de” (dịka anyị mere na mbụ, anyị ga -ebu ụzọ gwa gị nkwalite n'asụsụ French, emesịa n'asụsụ Spanish wee bụrụ ọmụmaatụ n'asụsụ France).
Près de ——–> dị nso ——–> Ọdụ ụgbọ ala dị na Il ya une nso la gare (E nwere ọkwa taxi n'akụkụ ọdụ ụgbọ oloko)
au-dessous de ——–> n’okpuru ——–> Okpomọkụ dị n'okpuru de zéro (Ọnọdụ okpomọkụ dị n'okpuru efu)
au milieu de ——–> na etiti ——–> À lststant, je me sens au milu de nulle akụkụ (N'oge a, ọ dị m ka enweghị ebe ọ bụla)
Loin de ——–> tere aka ——–> Gardez les enfants úkwù nke l'étang (Debe ụmụaka n'akụkụ ọdọ mmiri)
Nkọwapụta nke ebe
Ọ bụrụ na anyị lere anya nke ọma, "ebee", "ebee" ma ọ bụ "site na ebe" ha pụtara otu ihe mana anyị na -agbanwe echiche a, ọ dị mma? Ihe anyị maara bụ na mkpụrụedemede "a" n'asụsụ Spanish na -egosi ebe anyị chọrọ ịga ma ọ bụ ntụzịaka, "si" na -egosi obodo ebe i bi ma ọ bụ ebe ị ga -emecha "banye" na -egosi ókèala ma ọ bụ ebe anyị bi.
Ana m aga Buenos Aires.
Anọ m na ikuku ikuku buenos.
Esi m Buenos Aires.
Anyị ga -ahụ na n'asụsụ French, a na -eji otu ụdịrị nkọwa maka "ebe" na "ebe", ị ga na -eche etu ị ga -esi chọpụta, azịza ya bụ. na ị ga -eleba anya na ngwaa nakwa na okirikiri ahịrịokwu ahụ N'atụghị egwu ọzọ, lezienụ anya nke ọma n'ihi na ị ga -elerịrị anya ihe ị ga -eji mee n'ihi na ị nwere ike ime ka ahịrịokwu gị ghara inwe isi.
Ọ dị na Paris.
Ana m aga Paris.
Anyị nwere olile anya na edemede a enyerela gị aka inyocha ma ọ bụ mụta isiokwu a n'asụsụ French, anyị na -achọ gị ihu ọma maka ọmụmụ ihe gị, na ime ka ọ dịrị gị mfe, nke a bụ vidiyo na -akọwa isiokwu a:
Inicio » Asụsụ » Frances » Nkọwapụta French: kedu ihe ha bụ?